Takayidza ari kusimukira | Kwayedza
Takayidza ari kusimukira
14 Sep, 2018 - 00:09	 2018-09-13T08:16:25+00:00 2018-09-14T00:02:34+00:00 0 Views
MUIMBI wemusambo wechitendero ari kusimukira, Wellington Takayidza, anoti vechidiki ngavasanyare kana kutya kutaridza zvipo zvavo sezvo vachikwanisa kuwana raramo kubva mazviri.
Takayidza – uyo anotsigirwa nechikwata cheSeraphim Worshippers – achangobva kubura dambarefu rake rekutanga rinonzi Munamato-Prayer iro akaimba achibatsirwa naRobert Mandiki anove mumwe wevaimbi vechitendero.
Muchinda uyu anoti akatanga kuimba achiri kuchikoro uye ndokunyora mhanzi kubvira mugore ra2008 asi aitya kuitsikisa achifunga kuti zvimwe inogona kusatambirwa nemakambani anotsikisa mhanzi.
“Tichitanga kuita zvemhanzi, taifunga kuti ndezvevamwe chete uye isu hatizvikwanise. Ndaingonyora mhanzi chete ndisingatsikise, ndichifunga kuti hazvimbobude asi patakazoenda kustudhiyo kunotsikisa takaona zvichitoita zvichitobatana, ndokubura kwandakaita dambarefu rangu rekutanga iri. Saka ndinokurudzira vamwe vechidiki kuti vasanyare kana kutya kutaridza zvipo zvavo sezvo vachikwanisa kuwana raramo kubva mazviri,” anodaro.
Dambarefu rake iri rinotaura pamusoro pezvakanakira kunamata.
“Kuziva Mwari kwakakosha zvikuru uye kunoti batsira sevanhu kuti hupenyu hwedu huendeke zvakanaka. Chishuwo changu kuti mhanzi yangu ishandure vanhu vazive Mwari uye varambe zvitadzo nekuti zvinotibvisa panaMwari,” anodaro Takayidza.
Dambarefu iri rine nziyo dzinoti Nyararai, Muroti, Jehovah, Ngatibate basa, Ndisimbise Ishe, Fara, Vhangeri uye kambo kekuti Nyararai ndiko kari kurakidza kufarirwa nevakawanda mumakereke umo Takayidza anofamba achiridza.